Ifonti ye-Instagram-Ijenereyitha yefonti eyona ilungileyo yasimahla kunye nePremium
"Eyiphi ifonti ye-Instagram Ngaba ndisebenzise?" ngumbuzo esiva kakhulu, kwaye kulula ukuwuphendula! Kukho iintlobo ngeentlobo zeefonti ze-Instagram onokukhetha kuzo: Nazi iifonti ezingama-38 ezilungileyo kwiimfuno zakho ze-Instagram. Uya kuzifumana zombini kolu luhlu. ezininzi zeefonti ze-Instagram zasimahla.
Ifonti ye-Instagram - Iifonti ze-Instagram Yintoni?
Esi sisixhobo se-Instagram esikuvumela ukuba utshintshe ifonti ye-Instagram. Ezi zilandelayo zezona ntlobo zochwethezo zidumileyo kwi-Instagram: Zonke ii-Caps, iiCaps ezincinci, i-Bubble Text, i-Square Text, iBold, i-Old English Text, i-Italic, i-Upside Down Text, i-Strikethrough, i-Ink engabonakaliyo, kunye ne-Zalgo. Zonke izitayile zinokusetyenziswa kumajelo eendaba ezentlalo okanye kumaqonga omyalezo ngaphandle kokuthintelwa. Isiphumo sisicatshulwa esicacileyo se-Unicode-style kwiNotepad.
Kumhlaba wokuqala, ngenisa isicatshulwa ofuna ukusipapasha. Isiguquli sokubhaliweyo sitshintsha ngokuguqukayo okubhaliweyo kubhabho. Ungayikopisha kwaye uyincamathisele kwi-Instagram, Twitter okanye kuFacebook. Ezi fonti ze-instagram zinokusetyenziswa kwiiprofayili, ifonti ye-instagram kunye namazwana. Ukuba ufuna iintlobo zesicatshulwa esine-squiggly, ungasebenzisa i-emoji okanye oonobumba be-Unicode ukuyixuba.
Iimpawu eziveliswe yile generator ayizizo iifonti ze-Instagram zokwenyani kodwa iiseti ze icon. Kwi-Instagra, ke, unokukhuphela kwaye unamathisele kwi-bio yakho kunye nezimvo. Ukuba ibiziifonti zokwenyani, ubungenakukwazi ukuzikopa kwezinye iindawo (i-"kopi kwaye uncamathisele ifonti" ayinangqiqo - abayili bewebhusayithi bakhetha ifonti oyisebenzisayo, engenakuguqulwa).
Kodwa ukuba ubabiza ngeefonti (okanye iifonti ze-Insta, okanye iifonti ze-IGG ngokufutshane;), ngubani okhathalayo? Oku akwenzelwanga ukunyelisa umgangatho we-Unicode. Iyamangalisa ngokwenene - 100.000+ iisimboli zombhalo, kuquka yonke into ukusuka kwialfabhethi yokukhekela efana nezi ziboniswe ngasentla, ukuya kwiisimboli ezingaqhelekanga ze-emoji ezimele amawaka ezinto ezahlukeneyo.
Ukuba naziphi na iimpawu ezidweliswe ngasentla azixhaswanga kwi-Instagram bio yakho (okanye zivele njengamanqaku ombuzo okanye izikwere ezilula), isixhobo sakho sinokuphoswa ziimpawu ezifunekayo ze-Unicode. Ngenxa yokuba iprotocol ye-Unicode ibanzi, kuya kuthatha ixesha elide ukubandakanya zonke iisimboli kwigajethi ezizayo, kodwa inkqubela ikhawuleza ngoko inokuba yinyanga okanye ezimbini kuphela phambi kokuba isikhangeli/isixhobo sakho sibaxhase.
Ndizenza njani iifonti ze-Instagram?
Inqanaba loku-1: Yiya e https://instazoom.mobi/instagram-schrift/
Inqanaba loku-2: Kwibar yesixhobo, ngenisa okubhaliweyo ofuna ukukwenzela ifonti
Inqanaba loku-3: Khuphela ifonti oyifunayo uze uyincamathisele apho ufuna khona.
Iifonti ze-Instagram zenza izimvo zakho okanye imigca yesimo ibonakale kwaye iveze ubuntu bakho. Zonke zikhethwa ngokukhululekileyo. Nayiphi na imibuzo malunga nesi sixhobo esivela kuthi, ungasishiya umyalezo: zoqhagamshelwano